MTS in FLV - Sida loo rogo ama MTS in flv la MTS in FLV Converter
> Resource > Beddelaan > Sida loo rogo ama MTS in FLV
Haddii qof loo isticmaalaa in lagu qabto MTS ama kale HD videos AVC, ayuu daaliya lahaa in ay jiraan qalabka si yar oo taageeri MTS video. Sida caadiga ah, si toos ah waxaad ka ciyaari kartaa kaliya aad video MTS ka fiidiyo ah oo ku saabsan HDTV la HDMI ah, ama ciyaaro ciyaaryahan cajalid Blu-ray. Sida Sony users camera, waxaan jeclaan lahaa in aan la wadaago aan waayo-aragnimo ah oo ku saabsan sida loo badalo MTS videos in video caadiga ah iyo ciyaaro Computer, TV, playbacks la qaadi karo, PSP iyo geliyaan videos si ay ula wadaagaan internet.
Way fududahay. Waxaan u baahanahay ah MTS in FLV Video Converter , oo aad lacag la'aan ah waxaa halkan kala soo bixi kartaa, ka dibna loo soo dajiyo iyo waxa maamula.
Tallaabada 1. darsada MTS videos
Guji "Add Files" badhanka image ku darto aad MTS videos in MTS in ay FLV Converter. Waxaad ku dari kartaa wax ka badan hal file, maxaa yeelay taasi waxay MTS in FLV Converter taageertaa diinta Dufcaddii. Sidoo kale waxaad si toos ah jiidi kartaa video files in halkii riixaya badhanka image ka.
Tallaabada 2. Dooro qaab wax soo saarka
Waxaa jira qaabab kala duwan oo aad doorato u. Si aad u hesho qaab FLV ah, kaliya riix "Qaabka Output" image (icon u qaabab), ka dibna aad u hesho "Qaabka"> "Web"> "FLV". Waxaa Dooro iyo in ay tahay. Dabcan, hadii aad rabto in aad ka ciyaari video ku saabsan ciyaartoyda kale, kaliya heli qalabka saxda ah ee aad rabto iyo waxa guji. Waxaa aad u sahlan.
Tallaabada 3. Conversion
Tallaabada ugu danbeysay, kaliya aad u baahan tahay si ay u riix "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan qaab beddelidda. Inta lagu guda jiro qaab beddelidda, waxaa jiri doona bar diinta ka ah si uu idiin tuso horumarka. Ka dib markii ay diinta u dhammeeyey, waxaad ka heli kartaa faylasha final adigoo gujinaya "Open Folder".
Asal ahaan, video marti goobaha xaddido clips video in ay ku sugan size file gaar ah iyo dhererka. Tusaale ahaan, YouTube sheegay in "videos noqon kartaa ilaa 2GB ee size iyo 10 daqiiqo dheer". Waxaad clip video karaa in ay dhererka la doonayo la MTS in FLV Video Converter .
Beddelaan MTS in QuickTime MOV : Beddelaan aad camera MTS videos in qaab QuickTime MOV loo isticmaali in software Apple iyo qalabka iwm
Beddelaan MTS in AVI : doonaysaa si loogu badalo file ah MTS (AVCHD) si AVI ah oo aan laga badinin tayada wax? Tixgeli u sameeyeen.
Beddelaan M2TS / MTS in MPEG : Baro sida si fudud oo si deg deg ah loogu badalo files ee M2TS ama MTS in files MPEG tayo khasaaraha-yar ee Windows / Mac OS.
Beddelaan MTS in Mpg / MPEG : Beddelaan videos in Mpg, MPEG, iyo qaabab kale oo la ugu wanaagsan ee xawaaraha diinta iyo tayada wax soo saarka video.
Sida loo rogo ama MTS in DV
Sida loo soo dejinta Files regelingen in Lugood